Golaha Ammaanka oo u codeeyay in laga hortaggo u dhoofinta Soomaaliya walxaha qarxa - Radio Risaala: Somali News Online
Nin laba Carruur ah oo Xaaskiisu dhashay ku dilay duleedka Muqdisho
Meydka labada Carruurta ah oo muddo saacado ah la'aa kalana ahaa Wiil iyo Gabar ayaa waxaa saaka laga helay Xaafadda Jaamacadda Shabeelle oo ka...
Home Wararka Golaha Ammaanka oo u codeeyay in laga hortaggo u dhoofinta Soomaaliya walxaha...
Golaha Ammaanka oo u codeeyay in laga hortaggo u dhoofinta Soomaaliya walxaha qarxa
Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa u codeeyay khamiistii in laga hortago iibinta ama u rarida Soomaaliya ee walxaha qarxa , iyadoo ay jirto “qatar weyn” waxaa loo isticmaali karaa soo saarida aaladaha inta badan dilaaga ah ee sii kordhaya ee loo adeegsado weerarada Al-Shabaab.
Waxaa sidoo kale dowladda dhexe Soomaaliya loogu baaqay inay sii wado la dagaalanka kooxaha xagjirka ah ee lacagaha sharci darrada ah ka qaada dadka taasoo khubarada Qaramada Midoobay ay ku qiyaaseen inay ka soo xaroodeen $ 21 milyan sanadkii hore.
Qaraarka, oo lagu ansixiyay 13-0 oo ay u codeeyeen Ruushka iyo Shiinaha wuxuu mar kale xaqiijiyay cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya wuxuuna mamnuucay dib u iibinta ama wareejinta wixii hub ama qalab milatari ah ee la iibiyo ama la bixiyo si gacan looga geysto horumarinta Ciidamada Amniga Qaranka Soomaaliya .
Golaha ayaa cambaareeyay weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan ​​Soomaaliya iyo meelo ka baxsan, iyagoo sheegay in kooxdu “ay sii wadayso inay khatar weyn ku hayso nabadda, amniga iyo xasilloonida Soomaaliya iyo gobolka, gaar ahaan adeegsiga walxaha qarxa ee macmalka ah.” Waxay sidoo kale muujisay “walaac weyn” joogitaanka kooxo xiriir la leh kooxda Daacish ee Soomaaliya.
Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida ayaa weli ah ururka ugu adkaysiga badan qaarada Afrika, ayagoo gacanta ku haya qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxayna inta badan bartilmaameedsadaan goobo ku yaalla caasimada Muqdisho.
Dhowr hoobiye ayey sanadkan ku garaacday garoonka diyaaradaha caalamiga ee aadka loo ilaaliyo, halkaas oo ay ku yaallaan safaaradda Mareykanka iyo howlo kale.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo saxiixay Heshiiskii Siyaasadeed ee Doorashooyinka Dadban
Next articleUN votes to crack down on Somalia’s al-Shabab extremists